Wararka Maanta: Talaado, Dec 4 , 2012-Qaramada Midoobay oo sheegtay in Xaaladda Bani'aadamnimo ee Somalia ka jirta ay weli u muuqato mid khatar ah
Mas'uuliyiinta ka socday Qaramada Midoobay oo ka hadlay shir Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya ku dhexmaray Muqdisho 20-sano kaddib ayaa sheegay in ay u baahan yihiin yihiin 1.3 bilyan oo doollarka Mareykanka ah si ay u caawiyaan 3.8 milyan qof oo Soomaali ah saddexda sano ee soo socota.
"Xaaladda bani'aadamnimo ee Soomaaliya weli waa mid khatar ah," ayuu yiri shirka-jaraa'id ka sheegay Stefano Porretti oo ah ku simaha xafiiska xiriiriyaha gargaarka bani'aadamnimo Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Isagoo intaas ku daray in xaaladda Soomaaliya ka jirta ay tahay midda ugu ballaaran dunida.
Dalabka Qaramada Midoobay ee lacagaha lagu caawiyo dadka gargaarka u baahan ee Soomaaliya ayaa waxay imaanayaan iyadoo Al-shabaab laga saaray deegaanno badan oo ay horay uga talin jirtay, kuwaasoo la sheegay inay hay'adaha gargaarku ay dib howlahooda uga billaabeen.
"Horumarin lagu sameeyo ilaalinta xaaladda cunnada iyo isbedelka siyaasadeed iyo midka ammaan ee dalka ka jira ayaa waxay sahlayaan in laga hortago daadadka iyo abaaraha," ayuu Porretti.
Sannadkii 2001, Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro sababay macluul dishay dad fara badan oo beeraley iyo xoolaley ahaa, kuwaasoo ay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen ayna u soo bixi waayeen beerihii.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, C/kariin Xuseen Guuleed oo isaguna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid uga tashanayeen dowladda iyo Qaramada Midoobay sida loo caawin karo shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
"Dhibaatooyinka bani’aadanimo ee Soomaaliya ka jira waxaa lagu xallin karaa dadaal xoogan iyo wadashaqeyn dhexmarta hay'adaha gargaarka iyo dowladda, waxaana bulshada caalamka uga mahad-celineynaa gargaarka ay waqtigan siinayaan dadka Soomaaliyeed, waxaana ugu baaqaynaa Soomaalida inay hay'adaha gacan ku siiyaan sidii ay howlahooda u gudan lahaayeen," ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya.
Baaqan lacagaha lagu dalbanayo ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo Qaramada Midoobay ay kaga dhawaaqdo Muqdisho tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya muddo ka badan labaatan sano.